စပွန်ဆာဆိုတာ အဓိကပါဆိုတဲ့ တရုတ်မလေးများ...
အဆိုကျော်မက်ဒေါနားရဲ့ ဂန္တ၀င်တေးသီးချင်း ရုပ်ဝတ္တုပစ္စည်းမက်တဲ့ ကောင်မလေးသီချင်း နာမည်အတိုင်း
ပါပဲ....ကျွန်မတို့ ရဲ့ လက်ရှိကမ္ဘာကြီးကိုကရုပ်ဝတ္တုကိုဦးစားပေးတဲ့ ခေတ်ဖြစ်နေတာမို့ 
ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း ပစ္စည်းမက်တဲ့ ပစ္စည်းလေးဖြစ်နေပါပြီ..
As the classic Madonna song, Material Girl goes: Cause we're living inamaterial world, and I amamaterial girl.
အိမ်ထောင်ပြုခြင်းနှင့် ချစ်သူရည်းစားများ ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေများဆိုင်ရာ သုတေသနပြုမှုအ
အတွက်တွေ့ ဆုံမေးမြန်းမှုများအရ တရုတ်နိုင်ငံမှ မိန်းကလေးများရဲ့ ၇၀ ရာခိုင်းနှုံးက အိမ်ထောင်ပြုချင်တဲ့ 
လက်ထပ်ဖို့ တောင်းဆိုမည့် အမျိူးသားများအနေနှင့် နေထိုင်စရာ အိပ်ခန်း၊ နေအိမ် တစ်ခုကတော့ဖြင့် မရှိ
မဖြစ် ရှိနေရမည့် အရာဟု ယူဆကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ၊ ချူံကင်း နံနက်ခင်းသတင်းစာက ဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်...
တွေ့ ဆုံမေးမြန်းခဲ့မှုပေါင်း ၅၀၃၈၃ ခုအား တရုတ်နိုင်ငံ၊ လူမှုဝန်ထမ်းဆိုင်ရာအဖွဲ့ အစည်း၏ဇနီးမောင်နှံအ
ကျိူးဆောင်ကော်မတီနှင့် အဆိုပါအဖွဲ့ ၏စာမျက်နှာအားအင်တာနက်တွင် တင်ပြပေးနေသည့် ဘိုင်ဟေး
အင်တာနက်စာမျက်နှာ တို့ ကပူးတွဲ ထုတ်ပြန်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
အဆိုပါလေ့ လာချက်အရ ၈၀ ရာနှုံးမျှသော တစ်ကိုယ်နေအပျိူရေ မိန်းကလေးများက ချစ်သူရည်းစားထား
ချင်သည့် ယောကျာင်္းလေးများအနေဖြင့် တစ်လလျှင် ၀င်ငွေ ယွမ် ၄၀၀၀ ထက်မနည်းရှိမှသာ နှစ်ကိုယ်တူ
ကြည်ဖြူဖို့ ထိုက်တန်မည်ဟု ယုံကြည်ကြပြီး ထိုကဲ့ သို့ ယူဆချက်ကိုကိုင်စွဲသူများက ယခင် ၂၀၁၀ ခုနှစ်က
ထက် ၁၀ ရာခိုင်နှုံးကျော်ပိုများလာခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
သို့ သော်လည်း ၅၇ ရာခိုင်နှုံးမျှသော အမျိူးသမီး၊ မိန်းကလေးများကတော့ အလုပ်အကိုင်ကောင်းကောင်း
က အိမ်ထောင်သာယာချမ်းမြေ့ မှုထက်ပိုအရေးမကြီးကြောင်းယူဆကြပြီး ထိုသို့ ယုံကြည်မှုက ၂၀၁၀ ခုနှစ်
တွင် ၇၁ ရာခိုင်နှုံးရှိခဲ့ ရာကလျော့ ကျခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
Almost 70 per cent of women in China interviewed forasurvey regard having an apartment asaprerequisite for men to ask for marriage, reports Chongqing Morning Post, quoting an survey on the status of marriage and relationships in China.
The survey also shows that 80 per cent of single women believe only men who make more than 4,000 yuan (RM2,047)amonth deserve to havearelationship withawoman, more than 10 percentage points up from 2010.
However, only 57 per cent of women accept the claim that working well is inferior to marrying well, down from 71 per cent in 2010.
Posted by peter kyaw | at 12:38 AM |
Labels: news: China Daily/ ANN